10 Ebe Njem Oge Oge Gburugburu Ụwa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ebe Njem Oge Oge Gburugburu Ụwa
Train Travel Austria, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Inzọ Njem Portugal, Ingbọ ologo Spain, Train Travel Switzerland, Travel Europe
Ịmata ndị obodo na -enweghị ìgwè ndị njem na -ele anya n'ubu gị wee na -ebuso obere kafe mara mma, Ebe ndị a na-eme njem n'oge ụwa niile kacha mma maka ezumike a na-agaghị echefu echefu.
1. Ebe Njem Oge Oge: Ireland N'Ọktoba
Ejiri ọlaedo chọọ ya mma, ikuku dị egwu, ịma mma eke Irish nke Ugwu Wicklow, Naanị obere ụzọ si Dublin wee rute ebe nsọ mara mma. Ebe a, nzọ ụkwụ ọ bụla na -eduga gị na nsụda mmiri dị ịtụnanya, The Epic views, na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ndagwurugwu Glendalough na mmezi monastic nke narị afọ nke isii.
Uru ọzọ ịga leta oge ezumike Ireland bụ ohere ịnụ ụtọ otu pint nke Guinness n'ụlọ mmanya obodo, kpọmkwem n'ihu ọkụ na -emeghe.
2. Italy n'April
Ịgbagharị na Mediterranean, na -atụtụ truffles, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma, Italy bụ ebe kachasị eme njem oge ezumike na Eprel. Oge opupu ihe ubi bụ oge kacha mma ileta Italy dị ka okpomọkụ, iru mmiri, ahịa, ìgwè mmadụ na -ebelata.
Onye ọ bụla chọrọ ezumike na Amalfi Coast, ma ọ bụ n'etiti osisi vaịn na Tuscany. Otú ọ dị, ọ dị oke ọnụ ma jupụta na oge ọkọchị, oge kacha elu. Ya mere, n'April ime njem na Italy oge ezumike bụ oge kacha mma ịga.
Milan na Venice na A Train
Florence na Venice nwere ụgbọ oloko
Bologna na Venice Na A Train
Treviso na Venice Na A Train
3. Ebe Njem Oge Oge: Ndagwurugwu Loire France na etiti Septemba
Dahlia n'oge mgbụsị akwụkwọ, ikuku ugwu dị ọhụrụ, akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ, na obere ikuku n'ụbọchị anwụ, ị ga -ahụ ndagwurugwu Loire nke oge a bụ nrọ zuru oke. Amara ime obodo French mara mma maka mmanya ọcha, na oge owuwe ihe ubi na-amalite na etiti Septemba.
Ya mere, Oge kacha mma iji gaa Loire bụ Septemba, njedebe nke oge dị elu. Ị ga -eme ya na ememme Ogige Chateau de Chaumont, Ememe tomato na Chateau de la Bourdaisiere, na Festivini na nnukwu mmemme ya na Fontevraud Abbey. Anụ na -atụtụ n'ọgba ndị dị jụụ, ma ọ bụ hiking mgbe okpomọkụ daa, mana ụbọchị ka dị ogologo nke nwere ọtụtụ ìhè – Ndagwurugwu Loire bụ ọmarịcha oge ezumike na Septemba.
4. Ebe njem kacha mma n'oge njem na Germany: Munich Na Septemba-Ọktọba
N'agbanyeghị aha na -eduhie eduhie, nnukwu ememme biya na -amalite na Septemba. Oktoberfest bụ ihe dị ịtụnanya mere ị ga -eji gaa Germany, na obodo ya, Munich. N'oge a, ị ga -ahụ obodo ahụ n'ọgba aghara na Munich nwere nnukwu mkpọtụ.
Ọ bụ ezie na nke a pụtara na o yikarịrị ka ndị njem ga -agba gị gburugburu, n'agbanyeghị na ọ bụghị oge zuru oke. Ọ ka bara uru ịgagharị na Munich oge ezumike na Septemba, naanị maka ịnweta anwansi nke Oktoberfest.
5. Ọnọdụ njem njem oge na China: Shanghai na Nọvemba
Na onu ogugu nke 26 nde mmadu, ị ga -ahụ onwe gị mgbe niile na igwe mmadụ na Shanghai. Otú ọ dị, ime njem oge ezumike na Shanghai pụtara na ndị njem ahụ alaghachitela n'ụlọ ha ezumike ezumike, yabụ ị ga -eso ndị obodo.
Ọzọkwa, ihu igwe dị na Shanghai na -adịkarị ọkụ na iru mmiri na -arị elu, yabụ ihe kpatara ị ga-eji mee njem oge-oge ma nwee mmasị na mbara igwe Shanghai na Nọvemba. Ọktoba-Nọvemba bụ oge na Shanghai mgbe iru mmiri dị, ulo, ìgwè mmadụ na -adakwa. N'ụzọ dị otú a, ị ga -erite uru nke ukwuu site na obodo ahụ na -atọ ụtọ ma dịkwa egwu.
6. Ebe Njem Oge Oge Gburugburu Ụwa: Andalusia Spain Na Septemba
Na a fiesta na ememme fọrọ nke nta kwa ụbọchị, mpaghara Andalusia mara mma na nke na -atọ ụtọ bụ nrọ na Septemba. Site na mmemme owuwe ihe ubi mmanya ruo ihe oriri mmiri na tanning n'ụsọ osimiri - ngwụsị Septemba bụ oge kacha mma ịga leta Andalusia..
Mgbe Ọgọstụ ruo mbido Septemba ka na -ekpo oke ọkụ, na ngwụsị Septemba ị nwere ike nweta mmiri ozuzo, ma ọ bụ anwụ na-acha n'akụkụ osimiri-ụbọchị zuru oke, mana ọ bụghị ruo n'ókè ị nweghị ike iku ume ma ọ bụ ịgagharị n'obodo ndị mara mma nke Andalus. na -ese anwụrụ ọkụ ụbọchị. Ya mere, Andalusia bụ ebe ezumike zuru oke na Spain na ngwụsị Septemba.
7. Algarve Portugal Na etiti Septemba
Algarve na -ama mma n'afọ niile, yabụ enweghị oge ọjọọ ịga leta. Maka igwu mmiri na izu ike n'ụsọ osimiri mara mma na Portugal, ma nwee oke osimiri Atlantic wee kpuchie ihe niile n'onwe gị, etiti Septemba bụ oge kacha mma iji gaa Algarve.
Mgbe oge okpomọkụ kacha ekpo ọkụ, ọ bụkwa ihe mmadụ juru, na oyi, ị ga -ezute ọtụtụ ndị na -awagharị n'okirikiri gburugburu otu n'ime ebe kachasị mma maka ndị na -egwu mmiri n'ụwa. Ya mere, Algarve bụ ezigbo oge ezumike n'etiti Septemba. Ị ga -enweta ohere na -adịghị ahụkebe ịnụ ụtọ coves ndị dị egwu, ọnụ ọnụ ugwu, na obodo ịkụ azụ n'akụkụ ụsọ oké osimiri.
8. Njem njem oge adịghị anya gaa Vienna na Septemba
Nri okporo ụzọ Viennese, mmanya, Jin, ma ọ bụ mmanya ọ bụla ị họọrọ bụ ihe ịtụnanya mere ị ga -eji gaa Vienna na Septemba. Mgbe oge okpomọkụ fọrọ nke nta ka ọ pụọ, ya na ìgwè ndị njem, mana ndị Viennese alaghachitela n'obodo na otu ahụ ka nnukwu emume si eme.
Ya mere, Vienna bụ otu n'ime mahadum kachasị 10 njem oge ezumike oge na Europe. Ị nwere ike họrọ n'etiti ime njem nlegharị anya n'ubi vaịn iji mee ememme n'otu n'ime ọtụtụ ememme na Ememme na Vienna naanị na Septemba na naanị maka ndị obodo. Enweghị ụzọ ka mma ị ga -esi anụ nri nri ndị Ọstrịa, omenala, na ịma mma Vienna karịa site na isoro ndị obodo.
Tupu ihe nkiri ahụ agbanwee na agba mgbụsị akwụkwọ na ọnụ ọnụ ya na -eyiri uwe mwụda ọcha ha, na Swiss Alps bụ anwansi anya-oge. Ozugbo ọtụtụ ndị njem na -alaghachi n'ụlọ, Alps nke Switzerland weghachite anwansi udo ha, na -eme ohere maka ihe omume mpụga na ihe nkiri.
Ya mere, Switzerland Alps bụ ọmarịcha njem oge ezumike na Septemba. Ihu igwe na -ekpo ọkụ, mbara igwe na -acha anụnụ anụnụ na ị nwere ike ịnụ ụtọ ịgagharị, ịgba ígwè, izuike na ịgagharị ọmarịcha echiche. Ya mere, ị nwedịrị ike ịrị otu n'ime ugwu ndị kacha maa mma na Europe Jungfrau.
10. Ebe Njem Oge Oge Gburugburu Ụwa: Paris na Disemba
Na-eje ije n'akụkụ Champs-Alyeese, ma ọ bụ site na Ogige Tuileries ruo Louvre na -enweghị igwe mmadụ na -eme njem nleta bụ ahụmịhe pụrụ iche na Paris. Oge ezumike Paris na-enwekarị ihunanya mgbe ị nwere ike ịgafe obodo kacha eme njem nlegharị anya n'ụwa, na -enweghị ndị njem nleta n'akụkụ niile. Mgbe oge ọkọchị na -enye ihu igwe kachasị mma na ụbọchị anwụ, Disemba kacha mma maka ezumike na Paris.
Ịga njem ezumike na Paris na Disemba bụ nkwa nke echiche dị ịtụnanya. Na mgbakwunye, ị nwere ike nweta ọtụtụ ndị enyi Ahịa ekeresimesi.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem oge ezumike gị gaa ebe ndị a na-arọ nrọ n'ụwa niile.
Ịchọrọ itinye ozi blọọgụ anyị "Ebe iri na-eme njem oge ụwa niile" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Foff-season-travel-locations%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
5 Best Obodo ato uto Iji Gbalịa Na Europe
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Denmark, Inzọ Njem Germany, Train Travel The Netherlands, Travel Europe